Qaar ka mid ah hadaladii Sir Alex Ferguson ugu caansan inta uu ahaaTababaraha Manchester United %
Qaar ka mid ah hadaladii Sir Alex Ferguson ugu caansan inta uu ahaaTababaraha Manchester United
By Ramzi Yare	 On Oct 10, 2019
Qaar ka mid ah hadaladii Sir Alex Ferguson ugu caansan Tababarihii hore Manchester United
1. “Waxaa ku dhaca Virus qof walba oo yimaada Man United. Waxaa loo yaqaan Viruskaas Guul. ”Sir Alex Ferguson
2. “Waligeey uma aanan ciyaarin in aan galo barbaro .” Sir Alex Ferguson
3 “Waxaan u sheegayaa ciyaartoyga inuu basku dhaqaaqayo. Naadigana uu horumar sameenayo. Baskuna ma sugi doono iyaga. Waxaan u sheegaa inay raacaan baska inta uusan ka tagin. ”Sir Alex Ferguson
4. ” Weerarku wuxuu ku siyaa guusha ciyaarta, balse daafaca wuxuu ku siinayaa koob.” Sir Alex Ferguson
5. ” Haddii aadan dagaalami karin 90ka daqiiqo, waxaa kuu wanaagsan in aad gurigaada ku sugnaato oo farxad la qaadato qoyskaada, kaliya waxaan u baahanahay shaqsi u dagaalamo kooxdan midabka cas ka sameesan.” Sir Alex Ferguson
6. ” Haddii aadan na taageri karin marka nagala badiyo, hana taageerin marka aan guulesano.”
7. ” Haddii aad isku maleyso ciyaar yahan weyn oo ay dadka dhan jecel yihiin, ogoow waxaa ka weyn Man United oo jecel inta adi ku jecel in ka badan. Sidaas darteed ma jiro ciyaar yahan ka weyn kooxda” (on Beckham 2005)
8. ‘Haddii Chelsea dhibco lumiso, bisaduhu bannaanka ayey u baxaan. Waana waada ogtihiin sida bisaduhu u eg yihiin – mararka qaarkoodna guriga maba ku soo noqdaan. ”
9. “Inaad raali galin ka bixiso habdhaqanka ciyaartoyga tababare kale waa mid aan laga fakarayn. Waa sharaf dhac, laakiin ma filayo in Wenger inuu waligiis raali gelin bixin doono… waa qof iska noocaas ah. ”(2005, on Wenger)
10. “Waxaan u maleynayaa inuu ahaa nin xanaaq badan. Waa uu jahwareeray sabab uun awgeed. Waxaan u maleynayaa inay tahay mid qaribtirtay masiibadaas waxaan rajeynayaa inuu dib u milicsado oo fahmi doono waxa uu yiri gabi ahaanba in ee yihiin wax lagu qoslo. ”( Sir Alex On Benitez 2009. United markee Liverpool horyaalka ka qaaday.)
11.”Waxaan halkaan u joogaa in Man United aan ka sara mariyo Liverpool.”
Maxaa ugu muhiimsanaa kulankii waynaa Germany iyo Argentina
Man United ayaa la sheegayaa in ay heshiis Afka ah la meel dhigtay weeraryahan cusub